လှပတဲ့မိုးရာသီလေးကို ဖြတ်သန်းဖို့ ဘာတွေဆောင်ထားသင့်သလဲ? – FemaleWear.net
လှပတဲ့မိုးရာသီလေးကို ဖြတ်သန်းဖို့ ဘာတွေဆောင်ထားသင့်သလဲ?
မကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မယ့် မိုးရာသီအတွက် ဘာတွေပြင်ဆင်ပြီးကြပြီလဲ? မိုးရာသီရောက်ရင် နေ့တိုင်းအိပ်ယာပေါ်မှာဘဲ လဲနေချင်ပေမယ့် အကြောင်းအမျိူးမျိုးတွေကြောင့် လဲနေလို့မရပါဘူးနော်။ အလုပ်ကိစ္စကြောင့် အပြင်သွားရတာမျိုးတွေ မဖြစ်မနေလိုအပ်လို့ အပြင်ထွက်ရတာမျိုးတွေ ကြုံလာတက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မိုးရာသီရောက်ရင် ဟိုဟာလိုတယ် ဒီဟာမဝယ်ရသေးဘူး မဖြစ်ရလေအောင် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကို list လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
မိုးရာသီအတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ်တာ ထီးဆိုတာတော့ လူတိုင်းသိပြီးသားပါ။ ဒါပေမဲ့ အလှအပကြိုက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ ချစ်စရာထီးလှလှလေးတစ်ချောင်းက မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် ထီးအဆင်လေးတွေကို သေချာလေးရွေးဝယ်သင့်ပါတယ်။
မိုးရာသီမှာ Boots လေးတွေဟာ မရှိမဖြစ်တစ်ခုပါ။ တခြားဖိနပ်တွေကို စီးရတဲ့အခါ ခြေထောက်လှလှလေးတွေကို ညစ်ပတ်စေနိုင်သလို မသန့်တဲ့ ရေတွေနဲ့ ထိတွေ့မိတဲ့အခါ အရေပြားတွေမှာ ဝဲလိုမျိုး အနာတွေ အပိန့်တွေပေါက်စေနိုင်တာကြောင့်ပါ။
မိုးရာသီအတွက် မိုးကာအင်္ကျီတစ်ထည်လောက်ကလည်း ရှိထားသင့်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုပါ။ မိုးကာအင်္ကျီဟာ သင့်ကို Fashion လည်းကျနိုင်သလို ထီးကိုင်ဖို့ အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ အပြည့်အဝလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
မိုးရာသီဟာ ရာသီဥတုအေးအေးလေးနဲ့ ချမ်းစိမ့်စိမ့်လေး ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဆွယ်တာအင်္ကျီလှလှလေးတထည်လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဆွယ်တာအင်္ကျီလေးတွေဟာ style ကျလှပပြီး ငယ်ရွယ်တက်ကြွတဲ့ အသွင်ကိုဆောင်တာမို့ မဖြစ်မနေတော့ ရှိထားသင့်ပါတယ်နော်။
လူငယ်တွေတိုင်း မရှိမဖြစ် တစ်ထည်တော့ ရှိထားသင့်တဲ့ထဲမှာ Hoodie လေးတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အချိန်နေရာမရွေး ပေါ့ပေ့ါပါးပါးနဲ့ လွယ်ကူစွာ ဝတ်ဆင်နိုင်ပြီး ချစ်စရာလူငယ်အသွင်ဆောင်တဲ့ Hoodie လေးတွေလည်း ရှိထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်း အကြံပြုလိုက်ပါတယ်နော်။
ဥတုသုံးပါးလုံး Trend ဖြစ်နေစေမယ့် Jean Skirt Fashion
ကိုယ်ဝန်ရှိနေပေမယ့် အမိုက်စားဖက်ရှင်တွေနဲ့ လန်းနေဆဲ Cardi B